Jọn 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
7 Ma mgbe ihe ndị a gasịrị, Jizọs nọ na-ejegharị na Galili, n’ihi na ọ chọghị ijegharị na Judia, n’ihi na ndị Juu na-achọ igbu+ ya. 2 Otú ọ dị, ememme ndị Juu, bụ́ ememme ụlọikwuu,+ na-eru nso. 3 Ya mere, ụmụnne ya ndị ikom+ sịrị ya: “Hapụ ebe a gawa Judia, ka ndị na-eso ụzọ gị wee hụ ọrụ ndị ị na-arụ. 4 N’ihi na ọ dịghị onye na-eme ihe ọ bụla na nzuzo mgbe ọ chọrọ ka ọha mara ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a, gosi ụwa onwe gị.” 5 N’eziokwu, ụmụnne ya ndị ikom+ enweghị okwukwe n’ebe ọ nọ.+ 6 Ya mere, Jizọs sịrị ha: “Oge m erubeghị,+ ma unu nwere oge mgbe niile. 7 Ụwa enweghị ihe mere ọ ga-eji kpọọ unu asị, ma ọ kpọrọ m asị, n’ihi na m na-agba àmà banyere ya na ọrụ ya dị njọ.+ 8 Gawanụ ememme ahụ; agawabeghị m ememme a, n’ihi na oge m a kara aka+ eruchabeghị.”+ 9 Ya mere, mgbe ọ gwasịrị ha ihe ndị a, ọ nọgidere na Galili. 10 Ma mgbe ụmụnne ya ndị ikom gara ememme ahụ, ya onwe ya mesịrị gaa, ọ bụghị n’ihu ọha kama dị ka à ga-asị na ọ bụ na nzuzo.+ 11 Ya mere, ndị Juu malitere ịchọ+ ya n’ememme ahụ, na-asị: “Olee nwoke ahụ?” 12 Ọtụtụ ndị n’etiti ìgwè mmadụ ahụ nọ na-atamu ntamu banyere ya.+ Ụfọdụ na-asị: “Ọ bụ ezigbo mmadụ.” Ndị ọzọ na-asị: “Ọ bụghị ezigbo mmadụ, kama ọ na-eduhie ìgwè mmadụ a.” 13 Otú ọ dị, ọ dịghị onye na-ekwu banyere ya n’ihu ọha n’ihi na ha na-atụ ndị Juu egwu.+ 14 Mgbe ememme ahụ gara ọkara, Jizọs gbagooro n’ụlọ nsọ wee malite izi ihe.+ 15 Ya mere, o juru ndị Juu anya, ha wee na-asị: “Olee otú nwoke a si mara akwụkwọ,+ ebe ọ na-agụghị akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ?”+ 16 Ma, Jizọs zara ha, sị: “Ihe m na-ezi abụghị nke m, kama ọ bụ nke onye zitere m.+ 17 Ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ ime uche Ya, ọ ga-ama ma ozizi ahụ ò si n’aka Chineke+ ka ọ bụ na m na-ekwu echiche nke onwe m. 18 Onye na-ekwu echiche nke onwe ya na-achọ otuto nke ya; ma onye na-achọ otuto+ nke onye ahụ zitere ya, onye a bụ onye eziokwu, ajọ omume adịghịkwa n’ime ya. 19 Ọ̀ bụ na Mozis enyeghị unu Iwu ahụ?+ Ma ọ dịghị onye n’ime unu na-erube isi n’Iwu ahụ. Gịnị mere unu ji na-achọ igbu m?”+ 20 Ìgwè mmadụ ahụ zara, sị: “Mmụọ ọjọọ ji gị.+ Ònye na-achọ igbu gị?” 21 Jizọs zara ha, sị: “Otu ihe ka m mere,+ ọ na-ejukwa unu niile anya. 22 Ọ bụ n’ihi ya ka Mozis ji nye unu iwu banyere ibi úgwù+—ọ bụghị na o si n’aka Mozis, kama o si n’aka nna nna unu hà+—unu na-ebikwa mmadụ úgwù n’ụbọchị izu ike. 23 Ọ bụrụ na e bie mmadụ úgwù n’ụbọchị izu ike ka e wee ghara ịda iwu Mozis, ùnu na-eweso m iwe dị ọkụ n’ihi na e nwere onye m mere ka ahụ́ dịchaa mma n’ụbọchị izu ike?+ 24 Kwụsịnụ ile mmadụ anya n’ihu wee na-ekpe ikpe, kama na-ekpenụ ikpe ziri ezi.”+ 25 Ya mere, ụfọdụ ndị bi na Jeruselem malitere ịsị: “Ọ́ bụghị nwoke a ka ha na-achọ igbu?+ 26 Ma, lee! ọ na-ekwu okwu n’ihu ọha,+ ọ dịghịkwa ihe ha na-agwa ya. Ọ̀ ga-abụ na ndị na-achị achị amatawo n’ezie na onye a bụ Kraịst?+ 27 Ma anyị maara ebe nwoke a si;+ otú ọ dị, mgbe Kraịst ga-abịa, ọ dịghị onye ga-ama ebe o si.”+ 28 Ya mere, mgbe Jizọs na-ezi ihe n’ụlọ nsọ, o tiri mkpu, sị; “Unu maara m, marakwa ebe m si.+ Abịaghịkwa m n’uche nke aka m,+ kama onye zitere m dị adị n’ezie,+ unu amaghịkwa ya.+ 29 Amaara m ya,+ n’ihi na abụ m onye nnọchiteanya si n’ebe ọ nọ, ọ bụ Onye ahụ zitere m.”+ 30 N’ihi ya, ha malitere ịchọ otú ha ga-esi jide ya,+ ma ọ dịghị onye bitụrụ ya aka, n’ihi na oge awa ya+ erubeghị. 31 Ma ọtụtụ ndị n’ime ìgwè mmadụ ahụ nwere okwukwe n’ebe ọ nọ;+ ha malitekwara ịsị: “Mgbe Kraịst bịara, ọ̀ ga-eme ihe ịrịba ama+ karịa nke nwoke a na-eme?” 32 Ndị Farisii nụrụ ka ìgwè mmadụ ahụ na-atamu ihe ndị a banyere ya, ndị isi nchụàjà na ndị Farisii wee zipụ ndị ọrụ nche ka ha gaa jide ya.+ 33 Ya mere, Jizọs sịrị: “Mụ na unu ka ga-anọtụkwu tupu mụ alakwuru onye ahụ zitere m.+ 34 Unu ga-achọ m,+ ma unu agaghị ahụ m, unu apụghịkwa ịbịa ebe m nọ.”+ 35 Ya mere, ndị Juu kwurịtara n’etiti onwe ha, sị: “Olee ebe nwoke a bu n’uche ịga, nke mere na anyị agaghị ahụ ya? Ò bu n’uche ịgakwuru ndị Juu gbasasịrị+ n’etiti ndị Grik ka o wee zie ndị Grik ihe? 36 Gịnị ka okwu a o kwuru pụtara, nke bụ́ ‘Unu ga-achọ m, ma unu agaghị ahụ m, unu apụghịkwa ịbịa ebe m nọ’?” 37 Ma n’ụbọchị ikpeazụ, bụ́ oké ụbọchị n’ememme ahụ,+ Jizọs guzoro ọtọ, o wee tie mkpu, sị: “Ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ onye ọ bụla nkụ,+ ya bịakwute m ṅụọ mmiri. 38 Onye nwere okwukwe n’ebe m nọ,+ dị nnọọ ka Akwụkwọ Nsọ kwuru, ‘Mmiri nke na-enye ndụ ga-esi n’ime ya na-asọpụta.’”+ 39 Otú ọ dị, o kwuru nke a banyere mmụọ nsọ nke ndị nwere okwukwe n’ebe ọ nọ na-aga ịnata; n’ihi na ha anatabeghị mmụọ nsọ,+ n’ihi na e mebeghị ka Jizọs dị ebube.+ 40 Ya mere, ụfọdụ n’ime ìgwè mmadụ ahụ ndị nụrụ okwu ndị a malitere ịsị: “Onye a bụ n’ezie Onye Amụma Ahụ.”+ 41 Ndị ọzọ na-asị: “Onye a bụ Kraịst.”+ Ma ụfọdụ na-asị: “Kraịst+ ọ̀ ga-esi na Galili bịa?+ 42 Ọ̀ bụ na Akwụkwọ Nsọ ekwughị na Kraịst ga-esi n’agbụrụ Devid,+ na ọ ga-esi na Betlehem+ bụ́ obodo nta ebe Devid biri?”+ 43 Ya mere, nkewa bilitere n’etiti ìgwè mmadụ ahụ banyere ya.+ 44 Otú ọ dị, ụfọdụ n’ime ha chọrọ ijide ya, ma ọ dịghị onye bitụrụ ya aka. 45 Ya mere, ndị ọrụ nche ahụ laghachikwuuru ndị isi nchụàjà na ndị Farisii, ndị Farisii wee jụọ ha, sị: “Gịnị mere unu akpọtaghị ya?” 46 Ndị ọrụ nche ahụ zara, sị: “Ọ dịtụbeghị onye ọzọ si otú a kwuo okwu.”+ 47 Ma, ndị Farisii zara, sị: “È duhiewokwa unu onwe unu? 48 Ọ̀ dị otu n’ime ndị na-achị achị ma ọ bụ n’ime ndị Farisii nke nwere okwukwe n’ebe ọ nọ?+ 49 Ma ìgwè mmadụ a nke na-amaghị Iwu ahụ bụ ndị a bụrụ ọnụ.”+ 50 Nikọdimọs, onye bịakwutere ya n’oge gara aga, onye bụkwa otu n’ime ha, sịrị ha: 51 “Iwu anyị ọ̀ na-ekpe mmadụ ikpe ma ọ bụrụ na o bughị ụzọ nụ+ n’ọnụ onye ahụ wee mara ihe ọ na-eme?” 52 Ha zara ya, sị: “Gị onwe gị kwa, ì si na Galili? Chọọ n’Akwụkwọ Nsọ, ị ga-ahụ na ọ dịghị onye amụma+ ga-esi na Galili.”* * Ihe odide ochie bụ́ Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, na akwụkwọ codex bụ́ Sinaitic Syriac edenyeghị amaokwu nke 53 ruo isi nke 8, amaokwu nke 11, bụ́ nke na-agụ (n’ụzọ dịtụgasị iche n’ihe odide Grik na nsụgharị Grik dị iche iche) otú a, sị: 53 Onye ọ bụla n’ime ha wee laa n’ụlọ ya.